Home Wararka Laftgareen oo xirtay kursiigiisa Xildhibaan
Laftgareen oo xirtay kursiigiisa Xildhibaan
Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa Maanta shaaciyay liiska 7 kursi oo ah kuraastii ugu ugu dambeysay ee laga soo doorto maamulka K/Galbeed.
Liiska kuraasta la shaaciyey oo soo afjari doonta doorashadii K/Galbeed waxaa ka mida kursiga jufada Madaxweynaha K/Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed (Laftagareen), kaasoo uu hore ugu fadhiyey Baarlamaankii 10-aad.
Kursigan oo si ulakac ah dib loogu dhigay ayaa warar kala duwan kasoo baxayaan, iyadoo laga cabsi qabo in C/casiis Lafta-gareen uu isu sharxo kursiga xildhibaan, isagoo qorshuhu yahay inuu noqdo Guddoomiyaha Baarlamaanka 11-aad.
Lafta-gareen oo isbaheysi la leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa doorashada ka reebay dhammaan siyaasiyiinta beelaha Digil iyo Mirifle uu ka cabsi qabay inay halis ku noqdaan damaciisa, waxaana ugu dambeeyay Shariif Xasan Sheekh Aadan, sidoo kale Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa isna laga reebay inuu dib ugu soo laabto Baarlamanka.
Inta badan wasiirada iyo mas’uuliyiinta Maamulka K/Galbeed oo uu ku jiro Guddoomiyaha Baarlamaanka K/Galbeed Cali Siciid Fiqi ayaa ka mid noqday xildhibaannada cusub ee Baarlamaaka Federaalka, wuxuuna maamulka K/Galbeed halis ugu jiraa in lagu kala tago marka ay bilaabato doorashada Federaalka.
Previous articleQeybtii 2aad: Handadaad iyo Ballanqaadyo ay Villada ku Bilaawday Xildhibaanada Cusub.
Next articleRooble iyo Farmaajo oo heshiis ku ah in Wasiirka Batroolka lagu difaaco kursigiisa! Sabab?
Wasiirka Waxbarashada Jubaland oo ku geeriyooday cisbitaal kuyaal Hindiya